के अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदैछन् ? प्रचण्डले गरे यस्ताे खुलासा (भिडियोसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदैछन् ? प्रचण्डले गरे यस्ताे खुलासा (भिडियोसहित)
जेठ १६ गते, २०७६ - १४:२९
भिडियो डबली, समाचार
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति लिखित रुपमा नै भएको प्रष्ट्याएका छन् । प्राईम टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा अर्का अध्यक्ष केपि शर्मा ओली र आफुँबीचमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष आलोपालो गर्ने सहमति लिखित रुपमै भएको बताएका हुन् ।
उनले साढे दुई वर्षपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने भन्ने कल्पनै नगर्ने बताएका छन् । देशमा शुसासन र विकासले गति लियो भने आफुँलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो नहुने प्रचण्डले बताएका छन् ।
उनले जिम्मेवारी बाँडफाँडमा स्पष्ट परिभाषित नगर्दा समस्या आएजस्तो देखिएको पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘म पनि एउटा नेताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग परिभाषित हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने सरकारको जिम्मेवारी एउटा अध्यक्षले र पार्टीको जिम्मेवारी एउटा अध्यक्षले गर्यो भने सन्तुलन त फेरि मिल्छ । म फेरि प्रधानमन्त्री भईराख्नु पर्दैन ।’
हेर्नुहोस् प्राईम टेलिभिजनसँग अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको कुराकानी
यस्तो छ गोप्य सहमति
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदै गर्दा नेतृत्वबीच एउटा गोप्य सहमति गरिएको थियो । त्यो सहमति बाहिर सार्वजनिक भएको थिएन । अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच लिखित सहमति हुँदा साँक्षीको रुपमा विष्णु प्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मा प्रभाकरको पनि उपस्थिति थियो ।
पार्टी एकता घोषणा हुनुपूर्वक अर्थात ०७५ जेठ २ मा भएको ५ बुँदे गोप्य सहमतिमा समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । सहमतिमा केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति गठनका लागि कसको कति संख्या रहने भन्ने पनि भागवण्डा भएको छ । बेला–बेला विवादमा पर्ने अनि तत्कालिन एमालेका कतिपय नेताले उठाउने वैचारिक र राजनीतिक विषयको विषयमा दुवैको मान्यतालाई थाँती राखेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।
जेठ १६ गते, २०७६ - १४:२९ मा प्रकाशित